Vidio akwadoro - wardgwọ Ọrụ --gwọ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Resources Na-atụ aro Videos
Vidio bụ ụzọ dị mfe iji nweta sayensị sayensị gbasara nsogbu nke ịntanetị ịntanetị.
Ndị a bụ ụfọdụ anyị na-akwado. Ha enweghị foto ndị gba ọtọ.
Mary Sharpe na-ewebata ọrụ nke Foundation Foundation Mmetụta Ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na Society (oge na-agba ọsọ 2: 12)
Na 2016 ndị otu Reward Foundation kwuru na 3rd International Conference on Technology Addiction na Istanbul, Turkey. Darryl Mead kwuru okwu na Ndị na - eto eto na - eche ihe ize ndụ ihu mgbe ha na - aghọ ndị na - egwu egwu egwu (oge na-agba ọsọ 12.07). Mary Sharpe lere anya Atụmatụ iji gbochie ịntanetị mmekọahụ riri ahụ (oge 19.47 na-agba ọsọ). Nnukwu Onye Ọrụ Nnyocha Ọkwá anyị, bụ Gary Wilson, kwuru Ịkwụsị ịntanetị ịntanetị na-ekpughe mmetụta ya (oge 17.24 na-agba ọsọ).
Ihe Omume nke Guys
Onye ọka mmụta sayensị nke Mahadum Stanford bụ Philip Zimbardo enweela mmetụta dị ukwuu na iche echiche banyere mmetụta ndị na-eme ka ụmụ nwoke ghara ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ. Na 'Ihe Omume nke Guys'ọ na - ajụ ihe kpatara arụmọrụ ụmụ nwoke ji dị ka ọ na - adalata n'oge a (oge na-agba ọsọ 4: 43).
Nnwale Ahụhụ Ukwu ahụ
Na 2012 Gary Wilson zaghachiri ihe ịma aka nke Philip Zimbardo na 'Nnwale Ahụhụ Ukwu Ahụ'. Ọ na-akọwapụta ihe akaebe nke ị consumptionụbiga ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nke ịntanetị dị ka otu n'ime ihe ndị nwere ike ibute ọdịda ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. A na-elele 'Nnwale Ahụhụ Ukwu Ahụ' na YouTube karịa oge 13.7 ma tụgharịa ya n'asụsụ 18 (oge na-agba ọsọ 16: 28).
Brain gị na Porn: Olee otú Intaneti na-emetụta Brain
Ihe ngosi vidiyo 2015 a bụ update na ndọtị nke okwu mbụ nke TEDx nke Gary Wilson (oge na-agba ọsọ: 1 hr 10 mins).
Egwuregwu Erectile nke Porn-Induced
As enweghi ike iji erectile na-eme ka nke a bụ otu n'ime nsogbu ndị kacha echegbu onwe ya maka ụmụ okorobịa na ndị di na nwunye, ọ bara uru ikiri ihe ngosi a site na 2014 iji ghọta ihe na-eme n'ụbụrụ na akụrụngwa mgbe anyị na-etinye ihe onwunwe na-akpali akpali. Enwere ike ịgwọ ya n'ọtụtụ ọnọdụ ọtụtụ ọnwa mgbe onye ọrụ na - akwụsị porn ma mee ka ụbụrụ gbaghachite (oge ịgba ọsọ: 55: 37).
Sayensị nke Ihe Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ
asapSCIENCE kere akụkọ ihe omuma a ga - enweta. ''Sayensị nke Ihe Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ'bụ nchịkọta doro anya nke otu na ihe kpatara ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike ịbụ na-eri ahụ (oge na-agba ọsọ 3: 07).
Ịhụ mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ
Gary Wilson na - ewepu anyị na ụzọ nchọpụta nke nchọpụta na - emeghị nchọpụta na - emepụta ihe ndị na - enweghị isi na - akpata mmetụta ahụike nke ịntanetị na - akpali agụụ mmekọahụ (oge 6: 54 oge ọsọ ọsọ).
Nwa Ogwu Na-eto Eto Na-enwe Ntaneti Igwe Ntaneti Ogologo
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na njirimara pụrụ iche nke ụbụrụ nwa ahụ site na afọ 12 ruo afọ 25 na mmetụta nke ịntanetị na-emetụta ụbụrụ ụbụrụ ahụ, lelee ihe ngosi a (oge agba ọsọ: 33 mins).
Jụọ onye na-ahụ maka nyocha banyere nsogbu nke Intanet Ịntanetị na Brain
Nke a dị omimi Interview TV ya na neurosurgeon Dr. Donald Hilton bara uru ikiri (oge ịgba ọsọ: 22: 20).
Okwu TEDx buru ibu nke na-ele ihe omimi nke ogwu riri ahu bu Douglas Lisle'sAchọpụta Ụtọ'(oge na-agba ọsọ 17:10).
Ọdịiche Dị n'etiti Ihe Ụtọ na Obi Ụtọ
Na vidiyo a nke Mahadum California TV kpọrọ "The Hacking nke American Mind“, Ọrịa neuro-endocrinologist Robert H Lustig na-akọwa na okwu dị mfe ihe dị iche n'etiti obi ụtọ na obi ụtọ dị ka ọrụ nke dopamine na serotonin na ụbụrụ. Ọ na-eleba anya na ndụ ụbọchị ọ bụla yana ihe na-akpali akpali ma na-emetụta ihe ndị anyị na-ebute ụzọ maka ihe ka mma ma ọ bụ nke ka njọ. Ọ na-achikọta akwụkwọ ọhụrụ ya bụ "The Hacking of the American Mind: The Science Behind the Corporate Takeover of Our Brains and Bodies. (Oge na-agba ọsọ: 32: 42).
A iko nke Tea
Wantchọrọ ịma banyere nkwenye na mmekọahụ? Kedu mgbe 'Mba' pụtara 'Mba!' Chọpụta na 'A iko nke Tea'(ụdị dị ọcha, Oge ọsọ 2:50).
Achọrọ ịhụ ihe ọzọ?
Akwa ebe ile anya bu 'yourbrainonporn.com'ebe Gary Wilson gbakọtara njikọ dị mma nke njikọ maka vidiyo ndị ọzọ na-enye aka banyere sayensị nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ.